Guuldarray u hoyatay 2! Wednesday, January 03, 2007
Way fududahay in faalo dhaadheer laga qoro masa�lo maxsuulkeeda la ogyahay oo markaa qof walbaa falanqeeyo qodobeeyana rayiga ku aadan arin dhamaatay.
Waxaa ummadda Soomaaliyeed manta hor yaal mashaariic aad u baaxad wayn oo kan ugu horeeyaa uu yahay aayaha ummadda Soomaaliyeed oo markaan si dhab ah handaad ugu jira!
Xagaagii sanadkii 2004 ayaa dood wadaag uu soo bandhigay Ururka Isbahaysiga Soomaliyeed ee Sweden ka jira waxaa cinwaan looga dhigay Soomaaliya ma sii jiri doontaa?
Mowduuc dadka intii badnayd ay aad u qariibsadeen, yaabna ka muujiiyeen soo bandhigidiisa. Laakiin ugu dambayntii si fiican looga dooday loona qaadaa dhigay.
Dadka badankiisa wax shaki ah ugama jirin in dalka iyo dadka soomaaliyeed sii jiri doonaan. Waxa manta lagu suganyahayna waxay u arkeen duruuf leh waqti xaddidan oo laga gudbi doono. Waayo ummadda waxaa la soo dersay waxa manta taagan wax ka qalafsan kana foolxun.
Nin ka mida martidii shirka doodana aad u xiisaynayay, laguna naanayso Dhaqaale, ayaa dadkii khilaafay oo ku dooday in soomaaliya aysan sii jiri doonin haddii ay ku sii socoto sida ay haatan ku jirto.
Aragtidaa la quursaday lana khilaafay wuxuu,Dhaqaale, ku ahaa qaafo gaar ah oo cidna lama qabin.
Maxamed Xirsi(Cabdi Bashiir) iyo aniga oo barnaamijka soo diyaarinay mowduucana soo bandhignay waxaa nugu beernaa welwel iyo aragti la mida midd ah tuu Dhaqaale la yimid oo waaba sababta keentay in aan mowduuc magacaas leh soo dorano.
In badan baa waxaad ka welwesho kugu waaberistaane, doodaa ayaa maskaxdayda ku soo duxday markaan arkay erayadii waawaynaa ee Xuseen Caydiid ku hantaacay ee isku darka Soomaaliya iyo Ethopia.
Sidaa darteed ayaan manta mar kale dood ka abuurayaa jiritaanka iyo mustaqbalka iyo weliba aayaha ummadda marka laga daawado muraayada manta ah, dibna loo milicsado maalmeheedii horeeyay iyo murugaday xambaarsanaayeen.
Waxaan filayaa in manta soomaali inteeda badan ay isku raacsantahay in jiritaankeedu si dhab ah caalad su�aal saaranyahay. Jiritaanka dhankaad doonto ka eeg kagana imow. Dhulka soomaaliyeed, Dadka soomaaliyeed ama labadoo laysku daray ma sii jiri doonaan?.
Ka dib burburkii ku dhacay Maxkamadihii Islaamiga ayaa durba waxaa soo ifbaxaya masalo naxdin leh mudana in qalinka khad loogu riiqo;
Midaynta ciidamada, dhaqaalaha iyo weliba passaborka Soomaaliya iyo Ethiopia waa falaadh lagu ganay laguna gilgilay jiritaanka Soomaliga iyo Soomaaliya.
Hadalka ka soo yeeray Xusseen Caydiid waaa mas�alo cajiiba ah!
Waa masalo abuurtay welwel ku aadan masiirka ummada Soomaaliyeed, halisna gelinaysa jiritaanka qaranimadda Soomaaliyeed.
Qof walboo maqlaana ay mudantahay inuu ka dagaalamo kana gilgisho.
Midowga Yurub ee la barbardhigay kan Soomaliya iyo Ethopia waa dood jaban oo aan meesha oolin.
Waxaan oran lahaa doqonimo, damiinimo ama dayuusnimay dugsanaysaa.
Doqonimo iyo damiinimo hadduu ahaa hadal aan loo meel dayin ee ku yimid hantaac iyo iska yeel yeel sidii nin himilo iyo hilaadin saadaaliniya. Wax ku eegna is yiri indhihii Kwame Nkruma iyo ragii doonayay inay Afrika mideeyaan.
Waa dayuusnimo haduu hadalku ahaa qasad dhab ah kashaha hoosena ku jiray. Dayuus waa nin ogolaada in laga sinaysto inta uusan isagu geyin ee maxaariimta u ah sida hooyadii, xaaskiisa iyo walaashii.
Arintaa waxaa la meel ah ninka doona in qaranimadiisa la kufsado meher xaaraan ahna loogu guriyo Ethopia.
Waxaa taa ka qoto dheer, kana mugwayn, kana baas badan hadii hadalku uusan ahayn mid ku eg wasiirka hadaaqay, sida uu sheegtay, ee uu yahay barnaamij ay la ogyihiin madaxda dawladda ku meel gaarka ah oo ay markaa Guuldarro labaad u soo hoyato ummadda ayaandaraysatay!
Allese lagama quustee, marka gudcurka habeenku ugu madowyahay waa marka oogta waaberi ugu dhawdahay.